Xildhibaankii ku dhex dagaalamay ‘dukaanka lagu iibiyo qalabka galmada’ oo diiday in uu ka dhaarto | Baahin Media
Xildhibaankii ku dhex dagaalamay ‘dukaanka lagu iibiyo qalabka galmada’ oo diiday in uu ka dhaarto
Jul 10, 2019 - jawaab
Elisha Abbo, oo ahaa Senetar Nigerian ah uu horraan ku dhex dagaallamay dukaan galmada lagu iibiyo ayaa diiday inuu ka dhaarto dhacdadaas kaddib markii uu hor tegay guddiga ka tirsan aqalka Senetka ee Nigeria.
Waxaa Senetarka laga doonayay inuu caddeymaha ku gadaaman dhacdadaas uga warbixiyo xildhibaanada kale sii loo ogaado sababihii ka dambeeyay falalkaas.
“Arrintani waxay hortaalla maxkamadda, kamana hadli karo xilligan oo ay warbaahinta halkan joogaan” ayuu yiri Elisha Abbo.
Elisha Abbo oo ah Senetar reer Nigeria ah oo 41 jir ah ayaa raali galin bixiyay ka dib markii uu u gacan qaaday gabadh ku sugan dukaan lagu iibiyo waxyaabaha galmada loo adeegsado, wuxuuna sheegay in aan horay loogu aqoon ficilladaas oo kale.”
Talaadadii lasoo dhaafay ayaa la baahiyay muuqaal laga helay kaameerada ammaanka ee CCTV loo yaqaanno, kaas oo muujinaya masuulka oo u gacan qaadaya gabadh caawiso ka ah dukaankaas, waxaana muuqaalkaas baahiyay wargeyska Premium Times. Intaas wixii ka dambeeyayna ficilka Abbo ayaa aad loo cambaareeyay.
Seneterka ayaa BBC-da u sheegay in muuqaalka “la jarjaray” wuxuuna sheegay in laga reebay qayb ay gabadhu isaga u gacan qaadaysay.
Isaga oo raali galinta u akhrinaya saxafiyiinta ayuu Abbo yiri: “Si dhab ah ayaan uga xumahay waxa dhacay, siday doontaba ha ku timaaddee, rag iyo dumar kaste oo wanaagsanna waa in ay lahaadaan qalbi ay wax ku cafiyaan.”